GINI MERE NDI MMADU NA-ENWETAGHI FAỊLỤ, NA-EDE "JIKỌỌ NA NDỊ ỌGBỌ" - TORRENT - 2020
Onye na-ere ọkụ ọkụ adịghị ebudata faịlụ ma dee "jikọọ ndị ọgbọ"
Mgbe ụfọdụ, kọmputa na-akụda, ha nwere ike ịbụ n'ihi mmebi ngwaọrụ ma ọ bụ nsogbu usoro. Taa, anyị ga-ege ntị na kaadị vidiyo ahụ, ya bụ, anyị ga-egosi otu esi eme nchọpụta, iji ghọta ma ihe ntanetịja ahụ ọkụchaala ma ọ bụ.
Kpebie ọdịda nke kaadị vidiyo ahụ
Kaadị vidiyo na-eje ozi iji gosipụta onyinyo ahụ na nyocha ihuenyo, yabụ, ọ bụrụ na ọ na-agbaji, oyiyi a kpamkpam kpam kpam, akụkụ ụfọdụ, ma ọ bụ ihe dị iche iche dị iche iche. Otú ọ dị, nsogbu ahụ nwere ike ọ gaghị ejikọta ya na nke a. Ka anyi ghota nke a karia.
Ihe ịrịba ama nke ọdịda kaadị vidiyo
Enwere otutu ihe ịrịba ama nke ị nwere ike ikpebi ma kaadị vidiyo ejiri ọkụ ma ọ bụ:
Nyocha ahụ dị na ọnọdụ ọrụ, Otú ọ dị, mgbe ịmalitere usoro ahụ, onyinyo adịghị apụta. Na ụfọdụ ụdị, ozi ahụ ka nwere ike igosipụta. "Enweghị Ihe Ịrịba Ama".
Hụkwa: Ntak nke nyocha ahụ na-apụ mgbe kọmputa na-agba ọsọ
Ihe oyiyi ahụ gbagọrọ agbagọ, agbụrụ dị iche iche, ya bụ, ihe oyiyi na-apụta.
Mgbe ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, a na-egosipụta njehie na ihuenyo-acha anụnụ anụnụ, usoro ahụ adịghịkwa buut.
Hụkwa: Na-akpata na ngwọta maka enweghị ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala na kaadị vidiyo
Ka ị na-elele kaadị vidiyo maka ahụ ike, ọ dịghị egosi na nke ọ bụla n'ime mmemme a.
Kaadị Nyocha Kaadị Video
Software maka ule kaadị vidiyo
Mgbe ịmalitere usoro ahụ, ịnụrụ BIOS ka ọ dị. N'ebe a, anyị na-akwado na ị na-ege ha ntị, na-amụ ntụziaka maka motherboard ma ọ bụ kọmputa iji chọpụta ụdị njehie ahụ. Ị nwere ike ịgụkwu banyere nke a na isiokwu anyị.
Gụkwuo: Ntugharị BIOS na-eme mkpebi
Ọ bụrụ na i nwere otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe mgbaàmà ndị a, nke a pụtara na isi nsogbu ahụ bụ kpọmkwem na ntanetị ntanetị, mana anyị na-atụ aro na ị ga-elebara akụkụ ndị ọzọ anya iji kpochapụ ọnụnọ ndị ọzọ.
Nsogbu na kaadị vidiyo na-abụkarị nsogbu nke ụdị ọzọ, enweghị ike ma ọ bụ njikọ ezighi ezi nke ụfọdụ wires. Ka anyị lebakwuo anya nke a:
Lelee njikọ na ọrụ nke ike. N'ime mmalite usoro, ndị ọzọ na-eme ka jụrụ oyi na onye nlekota nhazi ga-arụ ọrụ. Ke adianade do, jide n'aka na ike ejikọrọ na motherboard.
Gụkwuo: Otu esi elele arụmọrụ nke ike na PC
Ụfọdụ kaadị nwere ike ọzọ, ọ ghaghị ijikọ ya. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị nwere ndị na-ese foto ndị dị ike taa.
Mgbe ịpị bọtịnụ mmalite, nke dị na sistemụ ahụ, ọkụ ọkụ ọkụ ga-arụ ọrụ.
Lelee nyochaa. O kwesiri igosi ihe kwesiri itinye aka. Tụkwasị na nke ahụ, ṅaa ntị na njikọ ahụ. A ghaghị ịtinye eriri niile n'ime njikọ dị mkpa.
E kwesịrị ịnụ ụda mgbe akpụkpọ ụkwụ sistemụ.
Ọ bụrụ na ego ahụ nwere ihe ịga nke ọma ma enweghi nsogbu, ọ bụ kpọmkwem na kaadị vidiyo ọkụ ahụ.
Idozi na mweghachi nke kaadị vidiyo ahụ
Ọ bụrụ na agbakọtara usoro a n'oge na-adịbeghị anya, oge ịgba akwụkwọ nke kaadị vidiyo ma ọ bụ kọmputa adịghị anwụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-akpọtụrụ ụlọ ahịa maka ịrụzi ọzọ ma ọ bụ dochie anya maka akwụkwọ ikike ahụ. N'okwu a, ọ dị mkpa ka ị ghara ikpochapụ kaadị vidiyo gị, ma ọ bụrụ na a ga-ewepụ nkwa ahụ. N'ọnọdụ ebe oge ịgbagha ahụ gwụrụ, ị nwere ike iburu kaadị ahụ gaa na ebe ọrụ, nchọpụta ihe na ndozi ga-arụ ma ọ bụrụ na edozi nsogbu ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere otu ụzọ iji gbalịa iweghachite kaadị eserese aka. Enweghị ihe mgbagwoju anya na ya, na-agbaso ndụmọdụ:
Mepee akụkụ mkpuchi nke usoro usoro ahụ ma wepụ kaadị vidiyo ahụ.
Gụkwuo: Kwụpụ kaadị vidiyo ahụ na komputa
Kwadebe otu mpempe ákwà ma ọ bụ ajị anụ, tinye ya na mmanya na-aba n'anya ma na-aga ije na oku ahụ. Ọ bụrụ na ịṅụghị mmanya na-aba n'anya, jiri mkpochapụ mgbe niile.
Fanye kaadị vidiyo n'ime usoro usoro ma gbanye kọmputa.
Gụkwuo: Anyị jikọtara kaadị vidiyo na PC motherboard
Mgbe ụfọdụ oxide guzobere na kọntaktị bụ ihe na-akpata nkwụsị ahụ, ya mere anyị na-akwado ime nhicha, ma ọ bụrụ na ọghị eweta nsonaazụ, mechie kaadi ma ọ bụ rụzie ya.
Ịhọrọ kaadị eserese dị mma maka kọmputa gị.
Ịhọrọ kaadị ndị na-eserese n'okpuru mbadamba
https://termotools.com ig.termotools.com © Torrent 2020